Sanibar News|Nepal's Best Online Tech ,Deal With Technology , Politics , परिवार सुख नै सफलता को कारक हो – Sanibar News
परिवार सुख नै सफलता को कारक हो
परिवारमा सधै हाँसीखुसी छ, मेलमिलाप छ, प्रेमिल वातावरण छ । एकअर्काले मर्यादा पालना गरेका छन् । आपसमा सहयोग आदनप्रदान हुन्छ । हरेक समस्या वा अप्ठ्याराहरुमा सबैको साथ र सहयोग रहन्छ । सबैजना एकसाथ खाना खान्छन् । रमाइलो गर्छन् । चाडपर्व, उत्सव र जमघटमा सबैको सहभागिता रहन्छ । परिवारका सदस्यहरुले आ-आफ्नो काम वा जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । हजुरबा-हजुरआमाप्रति सबैको श्रद्धाभाव छ । बालबच्चाप्रति सबैको प्रेम छ । यस्तो परिवारले सुख खोज्न अन्त जानुपर्दैन । घर नै उनीहरुका लागि स्वर्ग हो । पौराणिक शास्त्रहरुमा भनिएको छ, परिवार सुख नै सर्वोच्व हो । हुनपनि परिवारमा सुख र मेलमिलाप छ भने जस्तोसुकै समस्याले पनि विचलित बनाउँदैन । परिवारको सुख यस्तो शक्ति हो, जसले हरेक सदस्यलाई सधै हँसिलो राख्छ । जाँगरिलो बनाउँछ । स्फूर्ति र उमंग कायम राख्छ ।
जब हाम्रो परिवार मर्यादित हुन्छ, उत्तरदायी हुन्छ, सुखी हुन्छ, खुसी हुन्छ, तब हाम्रा सबै दुःख, कष्ट, पीडा, अभाव नष्ट हुन्छ । त्यसैले हामी जहिले पनि परिवारसँग एकाकार भएर नै जीवनको सर्वोच्व खुसी खोज्ने हो । हरेक घरको आफ्नै संस्कार हुन्छ, चालचलन हुन्छ । त्यही संस्कारले नै परिवारलाई मर्यादित बनाउने हो । अक्सर हजुरआमा, हजुरबाले आफ्ना सन्ततीलाई पारिवारिक संस्कारको पालना गराउँथे । उनीहरुले आफुले हासिल गरेको परिपक्क सीप, ज्ञान, अनुभव बाँकी पुस्तामामा बाढ्थे । परिवारलाई एकढिक्का बनाउनका लागि महिलाको खास भूमिका रहन्छ । पारिवारिक धर्मले पनि सबै सदस्यलाई मर्यादित जीवन जिउनका लागि प्रेरित गर्छ । धर्मले मान्छेलाई विनम्र बनाउँछ । विनम्रताले एकअर्कामा सम्मान भाव पैदा गर्छ । एकअर्कामा गरिने आदर सम्मानले परिवारलाई सुखी तुल्याउँछ । परिवारलाई सुखी, खुसी, समृद्ध बनाउनका लागि धेरै कुराको आवश्यक्ता हुन्छ । खासमा कुल भनेको हाम्रो परिवारको उद्गम हो । आफ्ना पूर्खालाई हामी कुल मानेर श्रद्धा गर्छौं । कलहले कुलको नष्ट हुन्छ । कुलिनताले कुलको वृद्धि हुन्छ । संयुक्त परिवारको आधार हो, कुल, कुलको परम्परा, कुल देवता, कुल देवी, कुल धर्म र कुल स्थान । धर्मकोल अरु पनि कुनै केन्द्र हुन्छ, जसलाई सम्झिएर त्ससलाई सम्मान गर्नुपर्छ । शास्त्रको अनुसार स्त्री परिवार र धर्मको केन्द्रविन्दु हो । यसैले स्त्रीले पनि आफ्नो धर्मलाई पालना गर्नुपर्छ । आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नुपर्छ । शासत्रले भन्छ कि, स्त्रीले पति र घरका बुजुर्गको कुरालाई सम्मान गर्नुपर्छ । पालना गर्नुपर्छ । पति र पत्नीबीच मतभेद हुनु सामान्य र स्वभाविक हो । तर, यस्तो अवस्थामा संयमित भएर पतिको साथ दिनुपर्छ । पतिसँग यस कुरामा एकान्तमा छलफल गर्नुपर्छ । स्त्रीले आफ्नो चरित्रलाई उत्तम बनाएर राख्नुपर्छ । शास्त्र भन्छ कि, जब पति पत्नीमा आपसी कटुता वा मतभेत हुँदैन, गृहस्थी धर्म, अर्थ वा काम सुख समृद्ध हुन्छ । शास्त्र अनुसार जहाँ नारीको पूजा र सम्मान हुन्छ, त्यहाँ सुख, शान्ति र समृद्धि रहन्छ । पुरुषले यदि स्त्रीको उचित सम्मान गर्दैन, उनको भावनाको ख्याल राख्दैन भने उनको पारिवारिक जीवन नर्क समान हुन्छ । पुरुष एक पत्नीव्रत हुनुपर्छ । पुरुषले आफ्नो योग्यता, धन, बुद्धि सम्मान, शुद्ध चरित्र र परिवारप्रति दयाभाव बढाउनुपर्छ । परिवारका पाको, स्त्री र बच्चालाई खुसी राख्नमा ध्यान दिनुपर्छ । पुरुषले वीरतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । हरेक समयमा उनले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आफ्ना परिवारका सदस्यमा सहास र भयमुक्त जीवनको संचार गराउनुपर्छ । यद्यपी पुरुषले आफ्नो निर्णय एकलौटी रुपमा लिनु हुँदैन । सबैसँग सल्लाह गरेर लिनुपर्छ । संयुक्त परिवारको महत्व संयुक्त परिवारमा आमाबुवा, हजुरआमाहजुरबा, छोराछोरी रहन्छन् । काकाकाकी पनि रहन सक्छ । परिवारका सबै सदस्य एकढिक्का भएर बस्नु नै संयुक्त परिवारको खास विशेषता हो । हिन्दु सनातन धर्मले संयुक्त परिवारलाई श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मानेको छ । धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, जुन घर संयुक्त परिवारको पोषक हुन्न, उनीहरुको शान्ति र समृद्धि केवल एक भ्रम हो । संयुक्त परिवारले नै घरमा खुसी र समृद्धि ल्याउने हो । संयुक्त परिवारको रक्षा हुन्छ, सम्मान हुन्छ, संयम हुन्छ र सहयोग हुन्छ । संयुक्त परिवारबाट संयुक्त उर्जाको जन्म हुन्छ । संयुक्त उर्जाले हरेक दुःख नष्ट गर्छ । संयुक्र परिवार बढेर कुटुम्ब सम्बन्ध बन्छ । कुटुम्बको भावनाले सबै किसिमको दुःख मेटिन्छ । यही पितृयज्ञ पनि हो । तर, आजको सामाजिक परिवर्तनले धेरै परिवारलाई टुक्र्याएको छ । संयुक्त परिवारको ठाउँमा एकल परिवार छ । बद्लिदो जीवनशैली र प्रतिस्पर्धाले तनाव एवं बेचैनी जन्माइदिएको छ । जबकी संयुक्त परिवारमा तनाव कम हुन्छ । एकअर्काको सहयोग, आड भरोसाले जीवन सधै खुसीपूर्वक वित्छ । संयुक्त परिवारमा बालबच्चाको लालनपालन र मानसिक विकास पनि सही ढंगले हुन्छ । बुढाबुढीहरु सन्तुष्ट हुन्छन् । बालबच्चाले घर परिवारबाट अमूल्य संस्कार सिक्ने मौका पाउँछन् ।
रगतको नमुना दिन महरालाई आदेश
महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन कांग्रेस संस्थापन तयार
काठमाडौं। टिपरको ठक्करबाट गोरखामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। गोरखा नगरपालिका १० स्थित गोरखकाली क्रसर उद्योगको टिपरले ठक्कर दिँदा स्थानीय एक विद्यालयमा दूध र्पुयाउन जाँदै गरेकी ५२ वर्षीया मनमाया तामाङको ज्यान गएको हो। गोरखा नगरपालिका १० अमलापानी घर भएकी मनमाया भुइँमा लडेपछि ग १ ख ८०२७ नम्बरको टिपरले ब्याक गरेर मारेको स्थानीयको दाबी छ। टिपर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनापछि...
कोरियाबाट फर्केर बाख्रापालन
महरा र आलम सांसदबाट निलम्बित
१. काठमाडौं उपत्यका कोरोनाको उच्च जोखिममा
२. के हो सुगौली संधि ?
३. काेरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा काठमाडौंमा पुन: तीन जना अस्पताल भर्ना
४. २० वर्षे युवक ६ महिनादेखि अस्पतालमा बन्धक !
५. २० वर्षे युवक ६ महिनादेखि अस्पतालमा बन्धक !